egbe ịhịa aka n'ahụ - Kedu uru ọ nwere maka ahụ anyị | Bezzia
Susana godoy | 10/01/2022 10:00 | Mma
Egbe ịhịa aka n'ahụ aghọwo otu n'ime ngwaọrụ ndị a na-ejikarị eme ihe n'oge ikpeazụ. Ọ bụ eziokwu na na mbụ naanị nnukwu ndị na-eme egwuregwu nwere ike irite uru na ya ma ugbu a ọ dị ka ihe niile agbanweela na maka ọnụ ahịa ọnụ ala, anyị nwere ike nweelarị otu n'ime ụlọ anyị ma rite uru na uru ya niile, nke na-adịghị ole na ole.
Ị maara uru ya niile? N'ihi na enwere okwu enyemaka maka belata ahụ mgbu. Ma ọ bụ eziokwu na ọ ka nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ i kwesịrị ịma. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ama na ọ ga-abụ enyi ọhụrụ gị iji nye ahụ gị dịkwuo mfe ma nwekwuo arụmọrụ. Ma ka anyị gaa nzọụkwụ site nzọụkwụ ka ị ghara uche a nkọwa.
1 N'ụzọ dị ịrịba ama na-ebelata ike ọgwụgwụ anụ ahụ
2 Mma mgbasa
3 Enyemaka ọrịa na-adịghị ala ala
4 Wepụ nkwekọrịta
5 Na-akwalite mmegharị ahụ
6 Ntụrụndụ ọzọ na ndụ gị
N'ụzọ dị ịrịba ama na-ebelata ike ọgwụgwụ anụ ahụ
Otu n'ime nnukwu uru nke egbe ịhịa aka n'ahụ bụ na ya ị ga-asị nke ọma na ike ọgwụgwụ anụ ahụ. Mgbe enwere ike ọgwụgwụ akwara ma ọ bụ ike ọgwụgwụ nke eriri, anyị ga-ekwu na enwerekwa ọzụzụ siri ike mgbe ọ gachara. Ọ bụ ya mere ihe mgbu nwere ike isi pụta n'ahụ niile ma dị ka égbè ahụ maara nke ọma ka esi kpochapụ ya. Ka ị na-agafe ya, ị ga-achọpụta na mmetụta ahụ ga-apụ ngwa ngwa n'ihi na ọ na-akwado mgbake.
Dị ka ọ bụ ịhịa aka n'ahụ, anyị maara na anyị ga-anọnyere ya na-arụ ọrụ ma na-emeziwanye mgbasa ozi. Gịnị na-eme ka ahụ dum oxygenate dị ka o kwesịrị. Ya mere, ọ dịghị mkpa itinye ike, ma na naanị isi kwesịrị ekwesị maka ya, ị nwere ike ịgafe ụkwụ ma chefuo ike ọgwụgwụ n'ime ha, n'ihi mmụba a na mgbasa ozi. Nke ahụ ọ́ bụghị nnukwu uru?
Enyemaka ọrịa na-adịghị ala ala
Isi ihe ndabere ya bụ ike ịsị ihe mgbu. Ya mere, ọ dịghị ihe dị ka itinye ya mgbe e nwekwara ọrịa na-adịghị ala ala dị ka ogbu na nkwonkwo. N'ime ya, mgbu na isi ike bụ ụfọdụ n'ime ihe mgbaàmà ndị a na-ahụkarị. Ya mere, iji belata ha, ọ dịghị ihe dị ka ịhịa aka n'ahụ dị nro na ngwa ngwa ma dị irè dị ka nke a na-enye site na egbe ịhịa aka n'ahụ.
Ọ bụghị naanị mgbu akwara na-esite na mmega ahụ bụ ebumnuche maka ọgwụgwọ a. Ma na mgbakwunye, contractures bụkwa usoro nke ụbọchị. N'ihi itinye oge dị ukwuu ịnọ ọdụ ma ọ bụ n'ihi ijeụkwụ ndụ anyị na-eduga, a na-enwekarị eriri na akụkụ nke ubu, cervical ma ọ bụ na mpaghara lumbar. Yabụ, maka ha niile, ịma jijiji nke egbe a wepụtara bụ otu n'ime ọgwụgwọ kacha mma. Kwuo ka ọ dị mma maka mgbaka akwara.
Na-akwalite mmegharị ahụ
Ọ bụ ezie na ikekwe n'akụkụ ụfọdụ anyị anaghị anabata ịhịa aka n'ahụ nke ọma, ọ bụ eziokwu na n'ikwu okwu n'ozuzu, egbe bụ otu n'ime echiche kachasị mma maka. meziwanye mmegharị nke ahụ dum. Ebe ọ bụ na site n'iwepụ esemokwu niile, anyị ga-achọpụta otú anyị si enwekwu mmegharị ahụ ebe ọ na-eme ka ntinye nke ihe oriri niile na-edozi ahụ na-eme ka anụ ahụ dịkwuo mma. Nke a na-ebute mgbake ngwa ngwa.
Ntụrụndụ ọzọ na ndụ gị
Ọ bụrụ na anyị kwuru okwu nkwekọrịta na mbụ, o doro anya na anyị ga-anọgide na-ekwu banyere ihe niile na-emepụta ha na otu n'ime ihe ndị kasị pụta ìhè bụ nrụgide. N'ihi ya ekele maka ịhịa aka n'ahụ, ụda ha na nrụgide a na-eme anyị ga-achọpụta ka ahụ na-atọpụ na ntụrụndụ ga-abata na ndụ anyị. N'ezie, site n'ịsị nke ọma na ihe a niile, anyị ga-enwekwu ike na ume ọzọ, ya mere na egbe ịhịa aka n'ahụ anyị nwekwara ike inwe mmetụta ahụ niile maka ekele ndị isi dị iche iche nke ezubere maka ìgwè anụ ahụ dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Uru niile nke egbe ịhịa aka n'ahụ
Otu esi ehicha ntị gị nke ọma